Android ဖုန်း theme များ Archives - Myanmar Mobile App
မန္တလေး။ ။၂၀၁၆ မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် Myanmar Mobile App မှ မန္တလေးမြို့မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်းတန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၇၉၇၂၄၈၄၈၈ ၊ ၀၉၉၁၀၃၃၁၃၄ တို့သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ရန်ကုန်။ ။၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် Myanmar Mobile App မှ ရန်ကုန်မြို့မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်းတန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉ ၇၃၀၂၅၀၆၇ ၊ ၀၉ ၂၅၉၂၆၉၂၈၉ တို့သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ Android ဖုန်း theme များ
Nokia မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Android ဖုန်းတွေအတွက် “Nokia Z Launcher”
Author: Myanmar Mobile App
Nokia ဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံး Android ဖုန်းတွေအဖြစ် Nokia X နဲ့ Nokia XL တို့နဲ့စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကိုပြန်လည်ထိုးဖောက်လာခဲ့ပေမယ့် ထင်သလောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး ။ အကြောင်းကတော့ သူ့ရဲ့ ဖုန်း screen ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင် နဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်လို့ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးသပ်သူတွေက ယူဆကြပါတယ်။ အခုတော့ Nokia ဟာ Nokia X နဲ့ Nokia XL တို့မှာသုံးခဲ့တဲ့ Windows Mobile Style အသွင်အပြင်နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲ Android Style အပြည့်အ၀ပါဝင်တဲ့ “Z…Read more
Android OS application များ, Android ဖုန်း theme များ
ExDialer Pro- Dialer & Contacts -V-1.73 For Android
Author: Aung BoBoLwin
Android ဖုန်းသုံးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အကောင်းဆုံးAndroid app dialerတွေထဲကတခုဖြစ်တဲ့Ex Dialer Pro ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိဖုန်းထဲမှာပါတဲ့Dialer keypad styleတွေကိုရိုးအီနေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမှာပါ။Themesတွေကိုပါပြောင်းလဲအသုံးပြုနိူင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ဒီApplicationကိုGoogle Play Storeတွင်ဒေါ်လာUS$3.7ဒေါ်လာဖြင့်ဝယ်ယူအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီးMyanmar Mobile App Storeတွင်တော့Freedownload ရယူအသုံးပြုနိူင်ပါပြီခင်ဗျား။ဒီApplicationလေးနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရမည်. Themes& Pluginsတွေကိုပါထဲ့သွင်းပေးထားပါတယ်။ပိုက်ဆံဖြင့်ပေးဝယ်ရတဲ့Themesအမြောက်အများပါဝင်လို့စုစုပေါင်းဒေါ်လာUS$ 40လောက်တန်ပါတယ်ခင်ဗျား။။အောက်ကလင့်ခ်တွင်ဒေါင်းလော့ရယူနိူင်ပါပြီ။ Required Android OS:2.1+ ======================= Ex Dialer Pro,Themes&Plugins-အားရယူရန် Or Ex Dialer Pro,Themes&Plugins-အားရယူရန် ================ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ထဲကEx dialer apkကိုအရင်ဆုံးမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာသွင်းပါပြီးရင်Doneနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါ။နောက်တဆင့်ကတော့Ex Dialer Pro Key apkကိုဖုန်းမှာInstallလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်Doneနဲ့ပဲထွက်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာEx Dialer proလေးကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်UI…Read more
Android Development, Android OS application များ, Android ဖုန်း theme များ
Samsung Galaxy S5 Stock Wallpapers in Full HD Quality
Author: Myo Minn Thant
Samsung Galaxy s5 မှာပါဝင်မယ့် stock Wallpapers များကို တစုတစည်းထဲဖြစ်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။Full HD Quality ဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်ထွက်ကလည်း စိုပြေနေတာပါပဲ။Wallpaper ပြောင်းလဲသုံးတတ်သူတွေ အတွက် ဆောင်ထားဖို့လက်မနှေးသင့်ပါဘူး။အခုပဲ Myanmar Mobile App Store မှာရယူလိုက်ပါ။ Galaxy S5 stock wallpaper အားရယူရန် Android OS application များ, Android ဖုန်း theme များ
Next Launcher 3D v3.05.1 Apk +Theme 270MB
Next launcher အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 1လပိုင်း 26 ရက်နေ့ ထွက်Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Next Launcher ဟာလူကြိုက်များတဲ့ Android Theme application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Next Launcher ခရေဇီတွေအတွက် Theme တွေနဲ့တွဲပီး သုံးပြု နိုင်အောင် Theme ပေါင်းစုံနဲ့တွဲပီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ် miloshare (or)d-h.st (or)mir.cr Theme miloshare (or)…Read more
Android များအတွက် မိမိဖုန်း notification center မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာဓာတ်ပုံထည့်နည်း
ပိုစ့်ရေးသားသူ-Zarni Aye Thein(Myanmar Mobile Users Group) ပထမဆုံး မိမိဖုန်းမှာ Xposed Installer နဲ့ Wanam Xposed ဆိုတဲ့ Apk လေးနှစ်ကို Install လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Xposed Installer လေးကိုဖွင့်ပြီး Framework ထဲဝင် Install/Update လေးကိုနှိပ် ထပ်မံ Install လုပ်ပေးရဖြစ်ပြီး၊ ပြီးသွားရင်တော့ အဲ့ထဲက Reboot လေးနဲ့ Restart ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်တက်လာရင် ထပ်မံ Xposed Installer ထဲဝင်…Read more
Android Tutorials, Android ဖုန်း theme များ
SIR Go Locker
Author: Lucifer Kwa
အရင်က ကျနော် SIR က Rocker ကြီးလေးယောက်လုံးနဲ့ပုံနဲ့ Go Locker လေးတစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြီးပေမယ့် SIR အမျိုးတွေအားလုံးအတွက် SIR Go Locker လေးလုပ်လိုက်ပါတယ် ကျနော်ဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက်လေးပြုလုပ်ထားတဲ့ Go Locker Theme လေးပါ ………. ဒီမှာဒေါင်းပါ >>https://www.mediafire.com/?pglj5wqdn1h8uqd Go locker သုံးနေကြဘော်ဒါတွေဆိုသိပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုမှ go locker စသုံးမယ့် ဘော်ဒါတွေကိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒီ Go Locker လေးသုံးမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ဖုန်းမှာ Go locker ရှိရပါမယ်…Read more
KitKat Launcher And KitKat HD Launcher Theme7in1
Author: Ko Min
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်ဘော်ဘော် တို.အတွက် KitKat Launcher နှင့် KitKat HD Launcher Theme7in1 နောက်ဆုံးဘားရှင်းလေးပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်……အရမ်းမိုက်တဲ့ Theme လေးပါ ခင်ဗျ။KitKat Launcher ကို Google Play တွင် Free ပေးထားသော်လည်း…. KitKat HD Launcher Theme7in1 ကတော $ 1.09 ဖြင်.ရောင်းထားပါတယ်….လိုချင်ရင်တော.အောက်ကလင်.တွင် Free ဒေါင်းပါ ခင်ဗျ။ …Read more
Marine Aquarium 3.2 PRO v1.07 Premium Live Walppaper 12MB
ရေအောက်ကမ္ဘာ Live Wallpaper လေးပါ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ် mirrorcreator (or) zippyshare (or)mirrorupload Android OS application များ, Android ဖုန်း theme များ
Launcher အလန်းကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် KitKat Launcher Prime v1.4.6.Unlocked ဗားရှင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ် အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ် mirrorcreator (or)zippyshare (or)mirrorupload Android OS application များ, Android ဖုန်း theme များ
Next launcher အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 11လပိုင်း 22 ရက်နေ့ ထွက်Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Next Launcher ဟာလူကြိုက်များတဲ့ Android Theme application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဗားရှင်းအသစ်မှာ အရင်ကနဲ့မတူဘဲ အရမ်းလန်းလာတယ်ဗျာ ယခု version မှာတော့ 3D Screen Mode ဆိုတဲ့ features အသစ်တစ်ခုပါဝင်လာပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Screen ဒီဇိုင်းကို 3D Transitions/effect တွေနဲ့ပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။ Next Launcher နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အခြား Theme…Read more
Next → Adv	Like us on Facebook	Myanmar Mobile App
Share on Facebook	Myanmar Mobile App Store | မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်းကျောင်း (Mandalay)
၂၀၁၆ မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းပြုပြင်ရေးသင်တန်း (Mobile Software/Hardware System Repairing Course) တန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်ပါမည်။ Recent Posts	ဒေါ်လာ ၃၄၉ နဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ မိုဘိုင်းဈေးကွက်ထဲကို ထိုးဖောက်နေတဲ့ Huawei
Samsung Galaxy K ZOOM Firmware
Honor 3C ( H30-U10 ) EMUI 3.0 V100R001CHNC00B268 & V100R001C900B320
iPhone အသုံးပြုသူတို့ရဲ့ Facebook Messenger မှာ Chess ကစားနိုင်ပြီ